Phandeeyar Makerspace Page 3
Posted October 5, 2016 by by Kyi Zaw Win
It was amazing two days (September 28~29 2016) to take part in American Center’s first Maker Faire at Baldwin Library, Yangon. There was so much energy and enthusiasm from people attending the… Read more »
Posted May 31, 2016 by by Theint Thazin
Cube bot ကတော့Ultrasonic sensor လေးနဲ့အလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရတဲ့ bot လေးပါ။ အရှေ့မှာ အတားအဆီးတစ်ခုခုတွေ့ရင် Auto ကွေ့မယ် အကောင်လေးပေါ့ Materials Needed 1xArduino 1x L293D motor driver 1x Ultrasonic sensor 2x robotic wheel Jumper Wires 1x box… Read more »
Line Follower လေးလုပ်ရအောင်
Posted May 19, 2016 by by Theint Thazin
Line Follower ဆိုတာ Line Follower ဆိုတာကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမဲရောင်လမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် အဖြူရောင်လမ်းကြောင်းလေးအတိုင်း auto မောင်းနှင်မယ့်ကားလေးပါ။ ကျွန်တော့် project မှာတော့ အမဲရောင်လမ်းကြောင်းကိုသုံးထားပါတယ်။ Line Follower ရဲ့လုပ်ဆောင်ပုံ Line follower မှာ tracking sensor ၂ခုပါပါတယ်။ Sensor ၂ခုလုံး လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကားဟာ… Read more »
ကျွန်တော်သိသလောက် Arduino အကြောင်း
Posted May 16, 2016 by by Theint Thazin
Arduino ဆိုတာဘာလဲ? Arduino ဆိုတာကတော့ open-source platformပေါ်အခြေခံထားတဲ့ micro-controller လေးပါ။ Micro-controller ဆိုတဲ့အတွက် သူ့မှာ Processor ပါမယ်၊　RAM ပါမယ်၊　ROM ပါမယ်　နောက်　GPIO pins တွေပါမယ်ပေါ့။ Arduino ကို　2005ခုနှစ်က　Italyနိုင်ငံမှာ Massimo Banzi နဲ့ နောက် co-founder လေးယောက်ကစပြီး　introduceလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Arduino board အမျိုးအစားများ Arduino borad… Read more »
World Arduino Day at Phandeeyar MakerSpace
Posted April 8, 2016 by by Charm
The 2nd April was World Arduino Day and Phandeeyar held an event to celebrate this super useful open source electronics platform. The event began with Ko Zwe Mann Tun from the… Read more »